Maraakiib Dagaal oo Mareeykanku leeyahay oo gaaray Qadar - Jazeera FM
June 15, 2017 admin featured
Maraakiibta dagaal ee Mareeykanka ayaa gaaray Dooxa xilli ciidamada ilaalada badda ee dalka Qadar ay isu diyaarinayeen dhoolatus Militari oo ay sameeyaan, waxayna arintan imaaneeysa maalmo yar kadib markii Madaxweeynaha Mareeykanka Donlad Trump uu ku eedeeyay dowladda Qadar in ay taageerto kooxaha argagixisada.
Dowladda Qadar ayaa marti gelisay saldhigga ugu weyn ee Mareeykanka ku leeyahay bariga dhexe, kaa oo la geeyay in ka badan 11,000 oo askari iyo weliba diyaarado dagaal oo kor u dhaafaya 100.
Wakaaladda wararka Qadar (QNA) ayaa baahisay in imaatinka maraakiibta dagaal ee maalinta Arbacada ay kusoo beegantay islama maalintii ay dowladda Qadar sixiixday heshiis ay Mareeykanka uga iibsaneeyso diyaaradaha nooc F-15, taa oo ay ku bixi doonto lacag dhan $12 Billion.
Heshiiska lagu iibsanayo diyaaraddan nooca dagaalka ayaa waxaa soo dhameeyay wasiirka difaaca Khaalid Al-Catiyah iyo dhiggiisa Jim Mattis, ayadoo heshiisku ka dhacay magaalada Washington ee dalka Mareeykanka.
Ma cadda in imaatinka maraakiibta dagaalka ee gaaray Dooxa ay ahayd mid hore loo sii qorsheeyay kahor xiisadaha kasoo cusboonaaday Khaliijka iyo weliba in ay tahay taageero ka timid dhanka Pentagon-ka.
Dowladda Sucuudiga, Isu tagga Imaaraadka Carabta (UAE), Baxreyn iyo dalal kale ayaa xiriirka Diplumaasi u jaray dowladda Qadar horaantii bishan, ayagoo ku eedeeynaya in ay taageerto kooxo argagixiso ah oo hubeeysan.
← Golaha Wasiirada oo Maanta Ka Doodi Doona Hindise Sharciyeedka La Dagaalanka Masuqmaasuqa
Somalia oo Qorsheyneysa Soo Nooleynta Dalxiiska Dalka →